एक वर्षदेखि शा रीरिक स म्बन्ध न राखेकी महिला, डाक्टरकहाँ पुगेपछि ग’र्भवती, तर कसरी….एकपटक अवश्य पढौं! – List Khabar
Home / रोचक / एक वर्षदेखि शा रीरिक स म्बन्ध न राखेकी महिला, डाक्टरकहाँ पुगेपछि ग’र्भवती, तर कसरी….एकपटक अवश्य पढौं!
एक वर्षदेखि शा रीरिक स म्बन्ध न राखेकी महिला, डाक्टरकहाँ पुगेपछि ग’र्भवती, तर कसरी….एकपटक अवश्य पढौं!
admin November 29, 2021 रोचक Leaveacomment 229 Views
आजको जमानामा धेरै किसिमका अनौठो खबरहरु सुनिन्छन् । यस्तै एउटा खबरले सबैलाई च’कित पारेको छ । जसमा एक महिला शा’री’रि’क स’म्ब’न्ध न’बनाई नै ग’र्भवती भएको बताइएको छ । ग’र्भवती भएको खबरले सबैलाई स्त’ब्ध बनाए पनि महिलाले विगत एक वर्षदेखि से; क्स गरेकी छैनन् ।
यौ; न स’म्प’र्क नगरी ग’र्भवती भएको यो घ’ट’ना विदेशको हो जहाँ बेलायती युवतीसँग अनौठो घ’ट’ना घ’टेको छ । महिलालाई उनको डाक्टरले शा’री’रि’क स’म्ब’न्ध बिना नै ग’र्भवती भएको जानकारी दिएपछि उनी छ’क्क परिन् । जससँग यो घ’ट’ना घ’टेको छ, उनको नाम सामन्था गिब्सन हो ।
विशेष कुरा यो हो कि सामन्था गिब्सनले आफैंले यो कथा संसारसामु राखेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो जानकारी दिएका हुन् । ती महिलाले भर्खरै यो खु लासा गरेकी छिन् र भनिन् कि शा’री’रि’क स’म्ब’न्ध नभए पनि डाक्टरले आफुलाई ग’र्भवती भएको बताएकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सामन्थाले एक वर्षदेखि यौ; न स’म्प’र्क नगरेको यो आ’श्च’र्य’ज’न’क कुरा बताइन् । विगत एक वर्षदेखि उनी कसैसँग शा’री’रि’क स’म्ब’न्ध राखेनन् । यस्तो अ’वस्थामा उनी कसरी ग’र्भवती भइन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ ।
वास्तवमा ती महिला र’ग’त परीक्षणका लागि डाक्टरकहाँ गएकी थिइन् र त्यही क्रममा डाक्टरले महिलाको ग र्भ रहेको घो’षणा गरे । सामन्थाले भिडियो जारी गर्दै जनतालाई यसबारे कसैलाई जानकारी छ भने बताउन आ’ग्रह गरेकी छन् ।
सामन्थाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै तिब्र गतिमा हेरिएको छ । भिडियोलाई १० लाख (१० लाख) भन्दा बढी हेरिएको बताइएको छ । यो भिडियोको प्रतिक्रिया देखेर महिलाले अर्को भिडियो सेयर गरेकी छिन् ।
यससँगै उनले लेखेका छन्, ‘मलाई लाग्छ कि डाक्टरहरूले उनको र’ग’त परीक्षणको रिपोर्टलाई ग’ल्तीले अरू कसैको रिपोर्टमा मिसाएको हुनसक्छ । केही दिनअघि सामन्थाको स्वास्थ्य बि’ग्रिएको थियो ।
उनलाई च’क्कर आइरहेको थियो र पेट दुखेको गु’नासो थियो। डाक्टरकहाँ गएर र’ग’त परीक्षण गराएकी थिइन् । पेटमा कसैले छु रा हा’नेजस्तो गरी पेट दु’खेको महिलाले बताइन्, तर डाक्टरले ग’र्भवती भएको भन्दै उनको हो श उ’डायो ।
भिडियोमा सामन्थाले भनिन्, ‘मैले डाक्टरलाई भनेकी छु कि म अहिले ग’र्भवती हुन सक्दिन, किनकि मैले वास्तवमा विगत एक वा दुई वर्षदेखि यौ; न स’म्प’र्क गरेको छैन । यो अ’सम्भव छ। त्यसपछि उनले मेरो स्ट्रिप टेस्ट गराए र त्यो ने’गेटिभ आयो।
यस पछि डाक्टरले भने कि ठीक छ, हामी तपाईलाई सा’वधानीको रूपमा अर्को र’क्त परीक्षण गर्नेछौं। ती विदेशी महिलाले थप भनिन्, ‘र’ग’त परीक्षणपछि पनि मेरो रिपोर्ट पर्खिरहेको छु तर धेरै महिना बितिसक्दा पनि म ग’र्भवती नभएको का’र’ण डाक्टरको फोन आएन ।
यद्यपि, मलाई अझै पनि डाक्टरकहाँ जानुपर्छ, किनभने मेरो पेटमा अझै केही दु’खाइ भइरहेको छ। मलाई लाग्छ डाक्टरहरूले म पेट दु’खाइको लागि आएको हुँ भनेर बिर्सेको हुनुपर्छ र उनीहरूले म ग’र्भवती छैन भन्ने महसुस गरेको हुनुपर्छ त्यसैले उनीहरूले सोचे, अब छो’ड्नुहोस्।
Previous एकाबिहानै बुद्ध एयरको विमान ठूलो दुर्घटनाबाट बच्यो
Next जापानद्धारा विश्वभरबाट बिदेशी प्रवेशमा प्रतिबन्धको घोषणा